प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ : प्रचण्ड - Kantipath.com
सदनमा विश्वासको मत माग्न प्रधानमन्त्रीसँग नैतिक अधिकार नरहेको प्रचण्डले बताएका छन् । उनले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘यो सदनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभएको छ । तपाईंले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी ? यो सदन, यी माननीय सदस्यहरूसँग तपाईंलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले ? अझै अनौठो कुरा के मान्छु भने यो विघटन गरेको सिफारिस सर्वाेच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदियो, त्यसकारण उहाँले स्विकार्नुभयो होला भन्ने म ठान्थेँ । तर, एक दिन राष्ट्रपतिज्यूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रधनमन्त्रीज्यू अदालतको फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न । सहमत हुनुुहुन्न भन्ने कुरा प्रस्ट राख्नुभयो । आज यदि तपाईंले यो विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन, त्यसपछि संविधानको अर्काे धारामा जान्छु, त्यसपछि म फेरि यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिको प्रयोजनमा जाने प्रयोजनका निम्ति आउनुभएको त होइन ? जनताले प्रश्न गरेका छन् । तपाईंमाथि आशंका गरेका छन् । तपाईं विघटनको पक्षधर भएको हुनाले त्यही विघटनको बाटो बनाउनका निम्ति तपाईंले विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त होइन ?’
प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको नियुक्तिहरूमा असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘आज विश्वासको मत लिनु थियो भने हिजो अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक किन गर्नुपरेको थियो ? यो विश्वासको मत लिएर गरेको भए पनि हुन्थ्यो परिषद्को बैठक । यसबाट के देखिन्छ भने तपाईंलाई भरोसा छैन । विश्वासको मत त मैले पाउने होइन । त्यसो भएपछि मैले कब्जा गर्न सक्ने जति संवैधानिक संरचना कब्जा गरिहालौँ भन्ने मनसायले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने ? तपाईंको मनभित्र त्यो छैन भनेर कसरी भन्ने ?’
प्रचण्डले तीन वर्ष नपुग्दै कम्युनिस्ट एकता क्षतविक्षत हुन पुगेको बताए । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘विडम्बना भन्नुपर्छ तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै कम्युनिस्ट एकता पनि क्षतविक्षत हुन पुगेको, संविधान पनि नराम्रोसँग चिथोरिएको, कोपरिएको र त्यो संविधानलाई कोरोना लागेकोजस्तो, खासगरी सरकारको गतिविधिले संविधानलाई पनि कोरोना लागेजस्तो र आइसियूमा राखेकोजस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिनुपरेको छ ।’
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विश्वासको मतका बारेमा आफूहरू पक्ष र विपक्ष दुवैमा नरहेको बताएका छन् । सोमबार उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘हामी यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, विपक्षमा पनि छैन । किनकि हामीहरू लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौँ । हाम्रो साथीहरू जेलमा छन् । सांसद जेलमा छन् । रेशम चौधरीलाई यहाँ हेर्न चाहन्छौँ, तर जेलमा हुनुहुन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि तारेखमा छन् । धेरै मेयरहरू तारेखमा बसेका छन् । सयौँ कार्यकर्ता मुद्दा अझै पनि खेपिरहेका छन् । किन ? यो संविधानले गर्दा । अहिलेको जुन अवस्था हेर्छौँ त्यो संविधानको त्रुटिले गर्दा नै हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले केपी ओली सरकार विगत तीन वर्षमा असफल प्रमाणित भएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले, कहिले, कहाँ रोक्यो ? प्रतिपक्षको हिसाबले हामीले रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह ग¥यौँ । त्यसका लागि हामी आलोचित पनि भयौँ । आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने ? अरूमाथि दोष र गुनासो थोपरेर जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्छ ? यो सरकार गठनपछि विगत तीन वर्षको मूल्यांकन गर्दा केपी ओलीको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । म मान्य प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्दछ, आफैँबाट भाग्न सक्दैन ।’
देउवाले सरकारको नैतिक चरित्र उदांगो भएको बताए । उनले भने, ‘कमिसनका कारण खोप आउन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । जनताको जीवनरक्षा गर्न औषधिमाथि पनि भ्रष्टचार गर्नु अमानवीयता, अनैतिकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा, जनताविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो । जनताको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने सरकार स्वयं खोप भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले पनि यो सरकारको नैतिक चरित्र उदांगो भइसकेको छ ।’
मुलुक कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भइरहेको छ। कोभिडका कारण कतिपय नागरिकको अमूल्य जीवन अन्त्य भइरहेको छ। कोभिड विरुद्ध लडाइँ लडिरहेका छौं। सरकारको ध्यान कोविभ–१९ को रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित छ।
आवश्यकता अनुसार आफ्ना ध्यान कोभिड विरुद्धको लडाइँलाई प्रावकारी ढंगले अगाडि बढाइरहेको छ। म कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्छु।
यस सदनको म माथि विश्वास छ भन्ने पुष्टी गर्न आवश्यक ठानेकोले यो प्रस्ताव राखेको हुँ। हामी कहाँ संलग्न छौं भन्ने मा होइन, हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर उभिएका छौं। जनताको भावना र हितको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं, यस्तो अवस्थामा हामीले विचारको आग्रह, आफ्ना स्वास्र्थबाट निर्देशित होइन, म कहाँ छु भनेर होइन, आवद्धता र संलग्नतालाई हेरेर होइन, सत्यलाई पछ्यायर निर्णय गर्नु पर्नेछ।
यदि हामीले सच्याइलाई पछ्याउँछौ भने वर्तमान सरकार कुनै पनि हिसाबले विश्वास नगर्नु पर्ने सरकार होइन। एउटा अग्नि परीक्षा मात्रै होइन, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्न, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसुर नराखेको कुरा तर्कभन्दा माथि छ।
तथ्यले तर्क गर्नु पर्दैन, तस्वीर आफैं बोल्छ भनेझैं हामीले लिएका अडानहरु आफैं बोल्छन्। उपलधि आफैं बोल्छन्, तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खलेको भूमिका यी सबै विषयमा हेर्ने हो भने नेपाल सुनिन र देखिन थालेको छ। सुन्नुपर्ने आवश्यक्ता महशुस हुन थालिएको देशको रुपमा स्थापित भएको छ।
धेरै बोल्नु पर्ने र त्यति व्यवहारिक, त्यति उपलब्धि पूर्ण ढंगले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास नगर्नु पर्ने कुनै कारण छैन। हामी आइडोलोजोकिल हुने हो भने बेग्लै कुरा होला, होइन भने यसमा अविश्वास गर्नु पर्ने या विश्वास गर्न नसकिने कुनै कारण नै छैन। यसै गरी शुसासन, समस्याहरुलाई थाँती राखेर, समस्याको गीत गायर होइन, समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकार प्रभावकारिता तर सफलताका साथ अगाडि बढेको यो सरकारलाई विश्वास नगर्ने?
हामीले वैचारिक हिसाबले, संविधानको स्वीकार्यता पालना, सर्वस्वीकार्य र त्यस प्रकारको कुनै समस्या छैन। जहाँसम्म सविधान यो वा त्यो अवस्थामा व्यवहारका क्रममा संसारका जुनसुकै संविधान पनि परिमार्जन हुँदै जान्छन्।
परिवर्तनका आवश्यक अनुरुप र देशलाई अगाडि बढाउन औचित्यपूर्ण, त्यसका लागि सरकार सबै पक्षसँग छलफल गर्न, मस्यौदाका सन्दर्भमा सुझावका लागि, कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ। संविधान असंशोधनीय होइन, औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।
विखण्डनको राजनीति, विभाजनको राजनीति होइन, त्यसै गरी राजनीतिक उद्देश्यका लागि माग पूरा गर्न गराउन हिंसालाई माध्याम बनाउनु पर्छ भन्ने जुन सोचहरु रहेका थिए, ती सोचहरु पनि अन्त्य भएको छ। सरकारले संवादको माध्यमबाट हिंसाको बिचार र मार्ग परित्याग गराएर शान्ति पूर्ण राजनीतिको मुलधभारमा ल्याएको छ। के यी ऐतिहासिक र ठूला उपलब्धी होइनन्?
बाटाघाटा पुल, झोलुङ्गेपुल निमार्ण द्रुतगतिमा भइरहेको छ। नेपाल सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। संचारको क्षेत्रमा यति धेरै कामहरु भएका छन्, हामी आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो जमीनको जानकारी पाउन सक्छौं, त्यसरी हामीले डिजिटल म्याप बनाएका छौं, नागरिक एप बनाएका छौं।
डिजिटल नेपाल बनाउने हाम्रो अठोट त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोशिस गरिएको छ। ५–जीको प्रयोग भइरहेको छ। मेरो कित्ता भनेर आफ्नै मोबाइलामा आफ्नो जमीन हेर्न सकिन्छ। अहिले १७ करोड लिटर मेलम्चीको पानी ल्याइएको छ। अबका केही वर्षमा ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा ल्याइन्छ र त्यसपछि काठमाडौंमा पानीको कमी हुँदैन।
अहिले हाम्रा अगाडि धरहरा निमार्ण भयो, दरवार हाईस्कुलको दृष्य नै फरक छ। सिंहदरबारको प्रवलिकरण भइरहेको छ। करिव वर्षमा १० किलोमिटर बाटो बन्ने देशमा दिनमा ६ किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ। यो तीव्रता आजको सरकारको हो। नयाँ १२ वटा स्मार्ट सिटी बन्दै छ। कृषिको आधुनिकीकरणका कामहरु भइरहेका छन्। सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भन्ने हो भने स्कुल छोडेर बाहिर जाने स्थिति नहोस भन्ने सन्दर्भमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ। कृषिलाई कसरी ठूलो मात्रको उत्पादनमा लान सकिन्छ। यी सबै एउटा भिजनका परिणती होइनन्?
Previous Previous post: काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १० सम्म निषेधाज्ञा थप्ने तयारी
Next Next post: नयाँ सरकार गठनको तयारी तिब्र : यी हुन् सम्भावित ३ विकल्प